साँचो प्रेम के हो ? सर्त बिना प्रेम सम्भव छ ?
साँचो प्रेम के हो भनेर कहिल्यै अचम्मित हुनुभएको छ ? निसर्त प्रेम हुन्छ कि हुँदैन भनेर जान्न चाहनुहुन्छ ? जुनसुकै समयको लागि सान्दर्भिक रहेको अनि अहिलेको समयमा अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको विषयमाथि सद्‌गुरु भित्री दृष्टि प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ ।